အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုရန် Jaca, သမိုင်းဝင်နှင့်umentရာမမြို့ | ခရီးသွားသတင်း
အဘယ်အရာကို Jaca တွင်ကြည့်ရှုရန်
လူးဝစ် Martinez | | စပိန်မြို့ကြီးများ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ဟူးစကာပြည်နယ်ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်အာရပ်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးဂျာကာမှာဘာတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးမိမှာပါ။ တကယ်တော့ဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည် Aragon ၏ကောင်တီ၏မြို့တော် ၎င်းသည်အလယ်ခေတ်တွင်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေထိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးမှယနေ့သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အထိမ်းအမှတ်များစွာရှိသည်။
ဒါပေမယ့် Jaca မှာမင်းမြင်တွေ့ရမယ့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေလည်းမရှိဘူး။ တောင်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများမှတဆင့်တောင်တက်ခြင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလည်းဖြစ်သည် နီဇ်။ Jacetan မြို့၏ခရီးသွား offer ည့်သည်ကိုခမ်းနားထည်ဝါသော gastronomy ကပြီးစီးစေသည်။ သင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 အဘယ်အရာကို Jaca, monရာမမြို့တော်၌ကြည့်ရှုရန်
1.1 San Pedro ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
1.2 Citadel၊ Jaca တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့်အရာ
1.5 San Juan de la Peña၏ဘုန်းကြီးကျောင်း
1.6 Jaca တွင်ကြည့်ရှုရန်အခြားအထိမ်းအမှတ
2 Jaca အစာအိမ်
3 ဘယ်အချိန် Jaca သို့သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ပိုကောင်းသလဲ
4 Jaca ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
အဘယ်အရာကို Jaca, monရာမမြို့တော်၌ကြည့်ရှုရန်
မြို့တော်နှင့်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုလုံးတွင်တစ်ခုရှိသည် ကြွယ်ဝသောဘာသာရေးနှင့်မြို့ပြအမွေအနှစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ မျှော်စင်များ၊ ရဲတိုက်များနှင့်မီးရထားဘူတာများကိုပင်ထင်ရှားသောချာ့ချ်များကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကြည့်ရအောင်
San Pedro ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
အမိန့်အားဖြင့် XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည် Sancho ramirezအာရာဂုန်ဘုရင်ကိုစဉ်းစားသည် ပထမ ဦး ဆုံး romanesque စပိန်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် စန်တီယာဂိုလမ်း, Jaca ဖြတ်သန်းရသော။
၎င်းတွင် semicircular apses အမြောက်အများ၊ ကော်လံများနှင့်စာလုံးကြီးများပါ ၀ င်သောတံခါးပေါက်နှစ်ခုနှင့်သွယ်သောအမိုးခုံးများဖြင့်အဆုံးသတ်မည့်ရှည်လျားသော naves သုံးခုပါရှိသည်။ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်တံခါးများ၌ထွင်းထားသောပန်းပုများကြားတွင်အလွန်ထူးခြားသည်။ ဘေးထွက်တွင်သင်တွေ့နိုင်ပါသည် jaquise လှံတံအလယ်အလတ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် ၇၇ စင်တီမီတာနှင့်တိုင်းတာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်း၌သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Diocesan ပြတိုက်Huesca ပြည်နယ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောချာ့ချ်များ၌အလွန်တန်ဖိုးရှိသော Romanesque ပန်းချီကားများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
Citadel၊ Jaca တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့်အရာ
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် san pedro ၏ရဲတိုက်၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင်မြို့အတွက်ခံတပ်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်Ansó, Santa Helena နှင့် Hecho ကဲ့သို့သောမျှော်စင်များဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သောနယ်စပ်ကာကွယ်ရေးကွန်ယက်၏ဗဟိုအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ရုံများ၊ စစ်တန်းလျားများ၊ ရုံးများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကဲ့သို့သောမှီခိုမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြန့်ကျက်ထားသည့်ဗဟိုရင်ပြင်တစ်ခုရှိသောကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ၌သင်တို့လည်းတစ် ဦး စပ်စုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် စစ်ရေးသေးသေးလေး၏ပြတိုက်.
Jaca ၏ Citadel
၁၉ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းတွင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်သောမီတာ ၁,၁၀၀ ကျော်သောအမည်တူတောင်ကုန်းမှမြင်ကွင်းကျယ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ Isaကြီးမားတဲ့ခံတပ် စတုရန်းမီတာသုံးသောင်းခြောက်ထောင်နီးပါးအနက်သိသာထင်ရှားစွာမှာမြေအောက်မျက်နှာပြင်ကျယ်ဝန်းသလောက်နီးပါးရှိသည်။
အဖြစ်လူသိများ ထောင်ကနေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မြို့ပြ Gothic နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံနှင့် Semicircular Arch အောက်ရှိတံခါးတစ်ခုဖြစ်သည်။
San Juan de la Peña၏ဘုန်းကြီးကျောင်း
၏ခံ့ညားသောကျောက်အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း ပန်တောင်ကို၎င်း၊, XNUMX ရာစုကတည်းကဒေသဆိုင်ရာသမိုင်းမျက်မြင်: ပထမ ဦး ဆုံးအာရာဂန်ဘုရင်များအဲဒီမှာသင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသင်သွားရမယ့်အခြားနေရာတွေကတော့ Romanesque အပြင်ဘက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပါ San Victorián၏ gothic Chapel နှင့်နောက် တော်ဝင် Pantheon, neoclassical စတိုင်။
လူထုအခြေပြုအမွေအနှစ်များအနေဖြင့် Jaca တွင်အဆောက်အ ဦး ၏အဆောက်အ ဦး ကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည် မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ၁၆ ရာစုတွင် Plateresque ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ က archiepiscopal နန်းတော်, အ XVII နှင့်၏ San Miguel တံတားအာရာဂန်၏မြောက်ဘက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသောအလယ်ခေတ်မှအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ထိုဒေသရှိအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမှာ၎င်းဖြစ်သည် Canfranc ဘူတာရုံ, 1928 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထိုအချိန်က Leipzig ပြီးနောက်ဥရောပ၌ဒုတိယအရေးအပါဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် ဒါဟာ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Somport ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, စပိန်နှင့်ပြင်သစ်ဆက်သွယ်သော။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာဗိသုကာနှင့် ပတ်သက်၍ ယာကာနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်မှအခြားဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် San Adrián de Sasabe၊ Santa María de Iguácelသို့မဟုတ် San Caprasio တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်ခမ်းနားထည်ဝါသော Romanesque အမွေအနှစ်များဖြစ်ကြသည်။
Jaca တွင်သင်မြင်ရမည့်အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသောအခါ၎င်းသည် gastronomy ကိုခံစားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများကိုအားပြန်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤဒေသသည်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်ရှည်လျား။ အအေးမိသည့်ဆောင်းရာသီများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဒေသ၏သင်းအုပ်ဆရာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်းတုံ့ပြန်ကြသည်
ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ် သိုး ဖုတ်သောသိုးသငယ်တကောင်၊ အတိအကျဒီ၏ GUTS နှင့်အတူ ခရီတိရစ္ဆာန်၏ကိုယ်ပိုင်ဗိုက်နှင့်ဆန်များပြည့်နှက်နေသည်။ အသားတွေထဲကတစ်ခုကိုသင်စမ်းကြည့်လို့ရတယ် တစ် ဦး l'Alforcha အမဲသားတန်း နှင့် walnut ဆော့စ်နှင့်အတူ braised ရိုင်းဝက်.
Bacalao အယ်လ် Ajoarriero
ငါးသည် Bacalao အယ်လ် Ajoarrieroကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်၊ အာလူး၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပြီးလျှင်ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော။ ပိုအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည် ကြက်ဥနှင့်အတူအစအနLoganiza သို့မဟုတ် chorizo၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆီနှင့်ကြက်သွန်နီတို့ပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်အချိုပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ Jaca pastry သည်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များထဲတွင်, သင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် ခရီကြက်ဥ၊ နို့၊ သကြား၊ ဂျုံနှင့် anise ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ က သပိတ်မှောက် နှင့် Santa Orosia ၏သရဖူအနည်းငယ်.
ဘယ်အချိန် Jaca သို့သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ပိုကောင်းသလဲ
ကျနော်တို့ Jaca အတွက်ရာသီဥတုသည်ဆယ်ဒီဂရီကျော်သာလွန်ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန်နှင့်အတူအအေးဖြစ်ပါသည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် တိုက်ကြီး ထို့ကြောင့်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်များရှိသည်။
ပထမတစ်ခုမှာအပူချိန်ငါးဒီဂရီသုညထက်နိမ့်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတို့တွင်ပိုမိုမိုးရွာသဖြင့်အေးသောလများတွင်ဆီးနှင်းများပင်ပေါများသည်။ ထို့ကြောင့် Jaca သို့သင်သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် နွေရာသီ.
Jaca မှာဘာတွေတွေ့ရမယ်၊ ဘာစားရမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကိုသင်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ရထားလမ်းမြို့ကိုဇာရာဂိုဇာနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့လိုင်းရှိတယ်။ အလားတူပင်ရှိပါတယ် ဘတ်စ်ကားများ ၎င်းကို Aragonese မြို့တော်နှင့်စပိန်၏အခြားဒေသများနှင့်ဆက်သွယ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားကိုအသုံးပြုလိုပါကအရှေ့ဘက်မှသင်ရောက်ရှိလိမ့်မည် N-260 အနောက်ဘက်၌ရှိသကဲ့သို့၊ N-240။ အဲဒီအစားတောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ကလမ်းကလမ်းပဲ E-7.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Jaca တွင်သင်တွေ့ရမည့်အရာများစွာရှိသည် - ပေါများလှပြီးတန်ဖိုးရှိသောheritageရာမအမွေအနှစ်များနှင့်လှပသောရှုခင်းများ၊ ၎င်း၏အရသာကောင်းသော gastronomy ကိုမမေ့ဘဲ။ Aragonese Aragonese ကိုသိချင်လို့လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » အဘယ်အရာကို Jaca တွင်ကြည့်ရှုရန်